साफ यू–१८ : नेपालले पाकिस्तानसँग खेल्दै, कसले मार्ला बाजी ? - साफ यू–१८ : नेपालले पाकिस्तानसँग खेल्दै, कसले मार्ला बाजी ?
साफ यू–१८ : नेपालले पाकिस्तानसँग खेल्दै, कसले मार्ला बाजी ?
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १२ आश्विन, 07:27:09 AM
काठमाडौं । साफ यू–१८ महिला च्याम्पियनसीपको पहिलो खेलमा नेपाली यू–१८ महिला टोली पाकिस्तानसँग खेल्ने तयारीमा जुटेको छ ।
भुटानको थिम्पुस्थित चाङलिमिथाङ मैदानमा नेपालले आज पाकिस्तानसँग खेल्ने छ । समूह ‘बी’मा रहेको नेपाल र पाकिस्तानबीचको खेल साँझ सवा ७ बजे शुरु हुनेछ । समूह ‘ए’मा भारत, माल्दिभ्स र श्रीलङ्का छन् । नेपालले दोस्रो खेल आगामी मङ्गलबार बङ्ङ्गलादेशसँग खेल्नेछ ।
२०७५, १२ आश्विन, 07:27:09 AM